ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း5ချစ်သူများယင်းတောက်ရုပ်ရှင်များ
အမျိုးသမီးများအတွက် ... ကောင်းကောင်း, ကပက်ထရစ် Swayze ရှိပါတယ်. ပြောစရာလိုအပ်? ထိုယောက်ျားတွေများအတွက်, ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလိုင်းရှိပါတယ်, ဒရာမာ, စိတ်ဝင်စားကြသည်, သစ္စာဖောက်, Whoopi Goldberg ကထောက်ပံ့နှင့်အချို့သောအစားရယ်စရာမြင်ကွင်းများ. ထိုဇာတ်သိမ်းရိုက်နှက်မရနိုင်ပါ! သူတို့အားမျက်ရည်ကျခန်းခြောက်ဖို့လက်ပေါ်မှာ Kleenex ရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
"ဒီ oldie, ဒါပေမယ့်၎င်း၏ Goodies "ကီဗင် Costner နှင့်နှောင်းပိုင်းှစ်တနီဟူစတန် features. ဒါဟာအဘယ်သူ၏ဘဝသူမ၏ "ပရိတ်သတ်တွေ" ၏တကခြိမ်းခြောက်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ "diva" သဘင်သည်၏ဇာတ်လမ်းသူမ၏ကာကွယ်ပေးဖို့ "သက်တော်စောင့်" ပေါ်တွင်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ပြောပြ. ကီဗင် Kostner Enter. ရင်ခုန်စရာအပြင်, ဒီရုပ်ရှင်ကိုကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, တစ်နေရာမှတစ်နေရာ, နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အဝ. ငါပေး5ဖျော်ဖြေရေးတန်ဖိုးကြယ်! တဖန်သင်တို့လွန်းလိမ့်မည်.
သင်သည်ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သွန်း၏အပြန်အလှန်နှင့် "ညီအစ်ကိုများ" ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်, မောရစ်သစ်အယ်သီး featuring, : D, L,. Hughley, ဘီလ် Bellamy, နှင့် Shemar Moore က. ဤတွင်င် 4-1-1: လေးယောက်ရာသက်ပန်မိတ်ဆွေများကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, အလုပ်မဖြစ်, နှင့်အသက်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု. သို့သော်ထိုသို့ထက်ပိုပါတယ်. သူတို့ကမိသားစုအစဉ်အလာကိုစိန်ခေါ်, oriented လူမျိုးရေးနှင့်အပေါ်တွင်လိင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်, တစ်ဦးတပြင်လုံးကိုအများကြီးပို. ဒါဟာရယ်စရာကောင်းရဲ့, sexy, နှင့်စမတ်. ကကြီးမြတ်စကားလက်ဆုံ starter င် ... သင်ကသို့ရောက်နေလျှင်.
ရော်ဂျာ Ebert ကြောင့်လို့အမည်ပေးထားတဲ့, ဒီနှစ် "အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်!"
ဒီရုပ်ရှင်ကိုဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းအားတကောင်လုံးအသစ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးသည်: "အဲဒါခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်။ "
ဒါဟာ Halle Berry နဲ့သရုပ်ဆောင်တဲ့, Billy တဲ့ Bob Thornton, နှင့် ပတ်သက်. Health လယ်ဂျာ. "Ball ကိုက" ပဋိပက္ခများ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ, သူ့ရဲ့လက်ပတ်နာရီအောက်တွင်ထားသူတစ်ဦးယောက်ျား၏ဇနီးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာတဲ့သူနာကြည်းအကျဉ်းထောင်အစောင့်. ဒါဟာဂရပ်ဖစ်င်, ကုန်ကြမ်း, riveting, အလွှာ. "Leticia" ၏ Berry ဟာရဲ့ရွေ့လျားနေသည့်ပုံဖော်ခြင်းဒီနေရာမှာသူမ၏တစ်ဦးအကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့သည်. ကို "Buzz" နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုတွေ့ရှ.
သင်သည်ယာကုပ် Earl ဂျုံးစ်ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရကြဘူး, Diahann Carroll, ခြောက်လကလေးတွေ, နှင့်သက်သာချောင်ချိရေးလုပ်သားတ? ရယ်မောခြင်း၏ Loading, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, နှင့်တက်ကြီးထွားလာ, (မပေးရုံကလေးတွေနှင့်အတူ).
အကြီးအကျယ်ဖျော်ဖြေဖြစ်ခြင်းတွေအပြင်, အဲဒါကို groove ကြီးစွာသောဂီတရှိတယ်, Gladys Knight ဟာ၏ယဉ်ကျေး. ဒါကြောင့်လက်လွတ်မထားပါနဲ့!